Qualcomm dia nanambara chip Snapdragon vaovao telo ho an'ny mid-range | Androidsis
Qualcomm dia nanambara fa misy chips vaovao Snapdragon telo: ny 653, 626 ary 427
Omaly Samsung dia nanambara fa nanomboka ny famokarana processeur faobe 10nm mila ny Snapdragon 830 vaovao ianao amin'ny voalohan'ny taona ho avy. Qualcomm iray nahazo tamin'ity taona ity manipy puce tsara kokoa amin'ny 820 noho io 810 io izay nanana olana goavana amin'ny hafanana amin'ny serivisy voalohany.
Androany ihany, nanambara i Qualcomm chip vaovao telo amin'ny andiany Snapdragon 600 sy 400: ny 653, 626 ary 427. Mpandrindra telo tonga amin'ny elanelam-potoana ary, na dia tsy mahavariana toy ny 830 manaraka aza izy ireo, dia mahaliana kokoa noho ny andian-tafika finday izay hitondra azy ireo miaraka aminy rehefa alefa eny an-tsena izy ireo.
Ny zava-misy dia nahavita nanatsara fanatsarana mahaliana niaraka tamin'ireo SoC vaovao i Qualcomm. Ny 653, 626 ary 427 izy telo dia mahazo modem X9 LTE ​​vaovao ary manolotra fanampiana ho an'ny Quick Charge 3.0 sy fakantsary roa izy ireo. Ny modem resahina dia manohana ny hafainganam-pandehan'ny Cat 7 hatramin'ny 300Mbps, ary ny Cat 13 mahatratra 150 Mps. Ireo dia hafainganam-pandeha 50 isan-jato tsara kokoa noho izay azo tamin'ny X8 LTE.
Ny Snapdragon 653 (MSM8976Pro) no mahery indrindra amin'ireo telo ireo. Ny orinasa dia nanambara fa ny 653 dia afaka manome 10 isan-jato bebe kokoa noho ny 652 teo aloha ary mahazo ny hafainganan'ny famantaranandro 1,95 GHz, manome fanohanana hatramin'ny 8 GB RAM izy, fampisehoana tsaratsara kokoa amin'ny GPU ary karazana fanatsarana hafa amin'ny maritrano. Mampifandray ny Enhanced Voice Services, izay hanatsara ny feon'ny antso.
Tonga ihany koa ny 626 manatsara 10 isan-jato ho an'ny teo alohany; ity no 625. Manana ny hafainganan'ny famantaranandro hatramin'ny 2,2 GHz, raha ny teo aloha dia nijanona tamin'ny 2,0 Ghz. Ity chip ity dia mampiditra ny Qualcomm's TruSignal, izay mahomby amin'ny fanatsarana ny fandraisana signal amin'ireo faritra be olona.
Ary farany, ny 427 dia ilay mahazo fanatsarana faran'izay kely indrindra raha ampitahaina amin'ny roa hafa. Mahazo fahombiazana CPU sy GPU tsara kokoa ianao noho ny 425. Ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro dia mitoetra ihany, na dia mahazo ny modem X9 LTE ​​aza dia efa mandroso lavitra noho ilay maodely teo aloha.
Ireo chips telo ireo dia ho hita ara-barotra amin'ny faran'ny 2016, raha 427 tamin'ny fiandohan'ny 2017.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Qualcomm dia nanambara fa misy chips vaovao Snapdragon telo: ny 653, 626 ary 427
Ny OPPO R9S Plus dia voasivana iray andro aorian'ny fampisehoana azy miaraka amin'ny RAM 6 GB
Netatmo Tongasoa, izahay dia mamakafaka ny fakantsary fanaraha-maso izay manaiky ny tavanao